Online ICT Project Competition in New Normal Life, 2020 ပြိုင်ပွဲအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း – University of Computer Studies (Magway)
Online ICT Project Competition in New Normal Life, 2020 ပြိုင်ပွဲအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး)ရဲ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Project Competition ပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပချိန် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ယခုနှစ်ကတော့ ယခင်နှစ်များနဲ့ မတူဘဲ Online ကနေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို Covid19 ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ရချိန် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ Professional life & Student life ကို မေ့လျော့မနေမိစေရန်နှင့် မည်သို့ပင် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့စေကာမူ မိမိတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့ဖြင့် မိမိတို့တတ်စွမ်းသမျှကို ဖော်ထုတ်ပြသခွင့် ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အဲဒီတော့ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သလဲ? ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး)မှာ တက်ရောက်ပညာသင်ယူနေကြတဲ့ ပထမနှစ် မှ ပဉ္စမနှစ်အထိ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။
(၂) အုပ်စုဖွဲ့ရာမှာ ဘယ်နှစ်ဦးအထိ ဖွဲ့နိုင်ပါသလဲ? အနည်းဆုံး (၁) ဦး မှ အများဆုံး (၅) ဦးအထိ၊ အတန်းတူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြစ်စေ၊ အထူးပြုဘာသာရပ်တူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြစ်စေ၊ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းပြီး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။
(၃) ဘယ်လိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာလဲ? အောက်ဖော်ပြပါ link (သို့မဟုတ်) QR code မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ပြီး MS Form မှာ Team leader က ဝင်ရောက်ဖြည့်စွက်၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
(၄) ဘယ်ရက်နောက်ဆုံး လျှောက်ထားနိုင်ပါသလဲ ? (၃၁.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ဆက်ဆက်လျှောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
(၅) ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ ?
(က) လျှောက်လွှာများပိတ်ပြီးနောက် ဩဂုတ်လ ပထမအပတ်တွင် Project Group များနှင့် တက္ကသိုလ်ပညာရေးအဖွဲ့တို့ Online တွင် MS Teams ဖြင့် Meeting ပြုလုပ်ပါမည်။
(ခ) (၁၄.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး Project Name and Project Description ဆက်လက်ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(ဂ) မိမိတို့၏ Project များကို Voting ပေးနိုင်ရေးအတွက် Project နှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသော Video file အား (၂၈.၈.၂၀၂၀)ရက်မတိုင်မီ တက္ကသိုလ်၏ သက်ဆိုင်ရာ email သို့ Soft Copy ပေးပို့ရ ပါမည်။
(ဃ) ဆက်လက်၍ (၂၈.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ Project နှင့်ပတ်သက်သော ဖော်ပြချက်များကို Microsoft Office 365 Powerpoint အသုံးပြု၍ A3 size ဖြင့် တက္ကသိုလ်၏ သက်ဆိုင်ရာ email သို့ Soft Copy ပေးပို့ရပါမည်။
(၆) ဘာဆုတွေပေးမှာလဲ ?
(က) ပထမဆု ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်
(ခ) ဒုတိယဆု ၂၀၀၀၀၀ ကျပ်
(ဂ) တတိယဆု ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်
စသည်ဖြင့် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၇) ဆုတွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မှာလဲ ?
(၁.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့မတိုင်မီ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စုအသီးသီး၏ Project Video များကို တက္ကသိုလ်၏ Facebook Page တွင် ပြသ၍ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ Voting ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ (၁.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၉း၃၀) အချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စုအလိုက် မိမိတို့၏ Project နှင့်ပတ်သက်၍ MS Teams ဖြင့် Presentation ပြုလုပ်ခြင်း၊ Project Video ပြသခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတင်ပြချက်များပေါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ အမှတ်ပေးဒိုင်အဖွဲ့မှ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းအလိုက် အမှတ်များပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒိုင်အဖွဲ့၏ရမှတ်နှင့် Voting ရမှတ်များပေါ်မူတည်၍ ရမှတ်အများအနည်းအလိုက် ဆုများချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒိုင်အဖွဲ့မှ အမှတ်များပေးရာတွင် Project ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလတစ်လျောက်တွင် အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်း MS Teams အသုံးပြု၍ စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပါ အမှတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(က) လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးတင်ရမည့်ရက် – (၃၁.၇.၂၀၂၀)
(ခ) Project Name and Description ပေးပို့ရမည့်ရက် – (၁၄.၈.၂၀၂၀)
(ဂ) Project Video File ပေးပို့ရမည့်နောက်ဆုံးရက် – (၂၇.၈.၂၀၂၀)
(ဃ) A3 Size ဖြင့် Powerpoint File ပေးပိုရမည့်ရက် – (၂၈.၈.၂၀၂၀)
(င) ပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်းနှင့်ဆုရွေးချယ်မည့်ရက် – (၁.၉.၂၀၂၀)
Previous PostPrevious Coursera For Students/ Coursera
Next PostNext Online ICT Project Competition in New Normal Life, 2020 (1st Meeting)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကွေး) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Copyright © 2021 University of Computer Studies (Magway) designed by DigiSoft (Myanmar). All Rights Reserved.